EyoMdumba 2019 | Gcina A Isitimela
Inyanga: EyoMdumba 2019
ekhaya > EyoMdumba 2019
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu imikhosi Easter e eYurophu ziyahluka ukusuka kwilizwe ukuya kwilizwe ukusuka edolophini ukuya edolophini. Yinto enye kwimisitho ezininzi ezibalulekileyo mdala of the Christian Church. Easter ekubhiyozeleni ngokuvuka kukaYesu Kristu engcwabeni. Umhla wokubhiyozela iPasika…
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Mardi Gras yamaJuda nabani? Faka Carnival yePuri! babhiyozele yePuri ngeentsuku 14 and 15 uAdare, ngenyanga yeshumi yeKhalenda yamaYuda eyenzeka ngexesha elinye March. YePuri has a zomkhosi efana umoya, nabantu mhlawumbi ekonakaleni kwabo konke okusemandleni iimpahla okanye fancy ilokhwe iSabatha…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Xa kuziwa ukutyelela iingqukuva eYurophu edume, ILondon ngokungathandabuzekiyo iphezulu kuluhlu lweminqweno yabakhenkethi kwaye zininzi izinto zokwenza eLondon. Imelwe elide, zinembali enika umdla; yezinto ezintle izinto; kwaye kukho izinto ezininzi…
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Izinto kusenokwenzeka kuba kubanda kancinane emhlabeni ngeli xesha, kodwa Mnandi Carnival ingaba uqinisekile ukuba eshushu kuwe phezulu! Umfula iRiviera waseFrance wenza umsitho owodwa apho phantse isigidi seendwendwe ezivela kwihlabathi liphela zithontelana ukuya eNice. I-Carnival entle yenye yezona zininzi…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu I Cologne Festival ngokuqinisekileyo kubalulekile esongeza kuluhlu yakho emele. 1.5 Izigidi eziya phantse rhoqo ngonyaka, uyavuma! Eyaziwa ngokuba yesihlanu-lonyaka, lo mbhiyozo edumileyo ngokuqinisekileyo iya kuba ngamava ebomini. I Cologne ekhanivali asinto nje fun kodwa…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Yinto engenakuphikwa kakhulu ezaziwayo-kakuhle ukuba iYurophu khona best sisi umgangatho. Kwaye xa imthanda itshizi, mhlawumbi ufuna ukwazi ukuba nguwuphi na lo sisi ilungileyo eYurophu kufuneka anikele nendlela yokufumana ngayo. Sijoyine njengokuba sibaleka…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ngaba uceba ukuya eYurophu kunye nosapho lwakho nangaliphi na ixesha kungekudala? Ukuba impendulo ngu-ewe, ke uya ufuna ukusebenzisa amatikiti Lixabiso Train Europe. Lonto ilungile. Uyakwazi azibeke amatikiti etreyini, Ezinexabiso eliphantsi xa usiya kuhambo…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ukuba ubuzifihla ukuba uceba uhambo oluya Amsterdam kodwa wokuqonda ixesha engcono ukuya, ungafuna ukuqwalasela utyelelo ngeVeki Restaurant 2019 e Netherlands. IVeki yokutyela sisiganeko senkcubeko esenzeka minyaka le kwihlabathi liphela…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Kule posi, siya kuzama ukufunda okungakumbi malunga nokuBhukisha iTikiti laseKhaya kwi-Intanethi. Kwiimeko ezininzi, abahambi bakholisa ukulinda de kube ngumzuzu wokugqibela emva koko babhukishe amatikiti abo. Nokufumana indawo amatikiti etreyini ngomzuzu wokugqibela asilizwi bubulumko ukuyenza. Oku kubhaliwe…